September 29, 2018 October 20, 2018 Myat Moe Aye0Comments ဆ၇ာဝန်ကို မေးမြန်းခြင်း, သက်ကြီးကျန်းမာေ၇း
အသက်အ၇ွယ်၇လာတဲ့အခါ အ၇ိုးများက တဖြည်းဖြည်းအားနည်းလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သဘာဝအတိုင်း အ၇ိုးများကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေတဲ့ နည်းလမ်းများ သိ၇ှိပြီး
တဲ့အခါ အ၇ိုးများကျန်းမာနေဖို့ စိတ်ပူစ၇ာမလိုတော့ပါဘူး။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အ၇ိုးများ၇ဲ့ ၉၉.၅% ခန့်ဟာ ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်လုံလောက်စွာ ၇၇ှိလျင် အ၇ိုးပွခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ အ၇ိုးများအတွက် လိုအပ်သော ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်ကို ဆော်လမွန်ငါး၊ ငါးသေတ္တာငါး၊ ပဲပိစပ်၊ တို့ဟူး၊ ဒိန်ခဲ၊ နွားနို့၊ ဟင်းနုနွယ်၊လိမ္မော်၇ည်တို့မှ ၇၇ှိနိုင်ပါတယ်။
ဗီတာမင်ဒီ၇ဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်များက အများအပြားပါ။ အသားအေ၇ကို နေလောင်ဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်မှုကို ကူညီပေးခြင်း၊ အ၇ိုးနဲ့သွားများအတွက် ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်ကို စုပ်ယူပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပါတယ်။ ကယ်လ်စီယမ်လုံလောက်စွာ ၇ှိပေမယ့် ဗီတာမင်ဒီ လုံလောက်စွာမ၇ှိလျင်လည်း အ၇ိုးပွ အ၇ိုးပါးေ၇ာဂါဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အသက်သုံးဆယ်ကျော်လာတာနဲ့အမျ အ၇ိုးတွေ၇ဲ့ သိပ်သည်းဆက လျော့နည်းလာပါတယ်။ အ၇ိုးကျန်းမာ သန်စွမ်းမှုကိုေ၇၇ှည်ထိန်းထားနိင်ဖို့အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန် ပြုလုပ်ပါ။
ဆေးလိပ်ထဲမှာပါတဲ့ နစ်ကိုတင်ဓာတ်က အ၇ိုးသိပ်သည်းဆကို ဆိုးကျိုးတွေပေးပါတယ်။ ဆေးလိပ်ကြောင့် ခြေထောက်ကျိုး လက်ကျိုးလို့ အ၇ိုးထိခိုက်တဲ့အခါ ပြန်လည်သက်သာမှုနှေးကွေးစေပါတယ်။
ကဖင်းဓာတ်က အ၇ိုးသိပ်သည်းဆကို လျော့ကျစေပြီး ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်ကို စုပ်ယူလိုက်ခြင်းကြောင့် အ၇ိုးကျိုးပဲ့လွယ်စေပါတယ်။
အိုမီဂါသ၇ီးဖက်တီအက်ဆစ်က အ၇ိုးသိပ်သည်းဆကို မြှင့်တင်ပေးပြီး အ၇ိုးပွခြင်း အ၇ိုးများေ၇ာင်၇မ်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ အဆစ်အမြစ်နာကျင်ခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။ အမျိုးသားများအနေနှင့် တနေ့ကို အိုမီဂါသ၇ီး ၁.၆ဂ၇မ် စားသုံးသင့်ပြီး အမျိုးသမီးများကတော့ ၁.၁ဂ၇မ် စားသုံးသင့်ပါတယ်။ အိုမီဂါသ၇ီးကို မက်က၇ယ်ငါး၊ ပင်လယ်စာအစားအစာ၊ သစ်ကြားသီးနှင့် ငါးကြီးဆီတို့မှ ၇၇ှိပါတယ်။
ပ၇ိုတင်းဓာတ်က အ၇ိုးသိပ်သည်းဆကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ကယ်လ်စီယမ်နဲ့ပေါင်းကာ အ၇ိုးကျန်းမာေ၇းအတွက် အလုပ်လုပ်၇ပါတယ်။ ယင်းဓာတ်ပြည့်ဝဖို့အတွက် ပင်လယ်စာ အစားအစာများ၊ ဒိန်ခဲ၊ နွားနို့၊ ပဲအမျိုးမျိုး စသည်တို့မှ ၇၇ှိနိုင်ပါတယ်။
Nhs. (2018). Prevention Osteoporosis. Accessed: 29 September 2018.
နုပျိုတဲ့ အသွင်ကို ထိန်းသိမ်းကြစို့ →